Ragaan kana caale hin jiru: Dr. Abiyyi ajaja habashaatiin qofa socho’a yeroo jennu ragaa malee miti. - Kichuu
[ August 12, 2020 ] Yaa Safuu dhabuu! Humni hidhate, humnii silaa biyyattiirraa diina	News
[ August 12, 2020 ] #PPn ni kufti qabsoo itti fufa!	News
[ August 12, 2020 ] የወላይታ ተወላጆች ተቃዉሞ በመንግስት ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት ላይ በ Washington DC	Amharic
[ August 12, 2020 ] Siyaasa Itoophiyaa: Obbo Lammaa Magarsaa miseensa Paartii Badhaadhinaa turanii, maalirraa ittifaman?	News
[ August 12, 2020 ] Ethiopia’s Defense Minister, Lemma Megersa, is under house arrest.	Africa
[ August 11, 2020 ] Tarkaanfilee WBO Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’uun LMKII irratti tibbana fudhataman	Radio
[ August 11, 2020 ] ከህወሓት ፅሕፈት ቤት የተሰጠ መግለጫ	Amharic
[ August 11, 2020 ] Ethiopia under PM Abiy: a Failed State in the lurking	Africa
[ August 11, 2020 ] At least 6 dead amid push to form new Ethiopia region: rights body	Africa
[ August 11, 2020 ] Tigray-federal tit-for-tat threatens trouble	World
HomeAfaan OromooVideosRagaan kana caale hin jiru: Dr. Abiyyi ajaja habashaatiin qofa socho’a yeroo jennu ragaa malee miti.
Ragaan kana caale hin jiru: Yaa sabaa akkan taatee??????? Hayyee numaa jiradhuu ati yeroof
Ragaan kana caale hin jiru. Dr. Abiyyi ajaja habashaatiin qofa socho’a yeroo jennu ragaa malee miti.
OMN: Oduu Guyyaa (Mudde 12, 2019)
Ragaan kana caale hin jiru.
Dr. Abiyyi ajaja habashaatiin qofa socho’a yeroo jennu ragaa malee miti. Nugusuun akkasitti Afaan Oromoon dubbadhu jedhee eeyyamnaaniif dubbachuu eegale. Qaanyii kana Oromoon gurra qabdu dhagahi
Video credit: O.C.C
Dr. Abiy afaan Oromoo dubbachuuf Nigusuu Xilahun, gurratti hasaasee “Afaan Oromoo xiqqo dubbadhu….” jedheenii MM dubbachuun waan akeeku qaba.
1) Ummatni afaan Oromoo dubbatu Dr. Abiy qalbii isaatiin yaadachaa akka hin jirre agarsiisa. Isa keessa waan jiru namni biraa yaadachiisuu hin barbaachisu waan ta’eef. “Nu taajjabanii afaan Oromoo xiqqo dubbadhu” wanti jedhu yaadachiisa komii jalaa bahuuti.
2) Fedhii afaanichaaf qabu osoo hin taane siyaasaaf itti fayyadamaa jiraachuu isaanii agarsiisa. Akka ummatni hin mufanne sossobuufi.
* Yeroo Nigusuu Xilahun gurratti hasaasu sagaleen ni dhagahama. Ragaan itti haasaasuu sagalee achirraa dhagahe.
Ethiopia: ከዶ/ር አብይና አረጋዊ በርሄ ፍቅር በስተጀርባ የታቀደው ድብቅ ሚስጥር Abiy Ahmed | Aregawi Berhe
African philosophy on the way: theorizing oromo philosophy and theology of land (lafi keenya lafee keenya, our land is our bones)
There is no rule of law in Ethiopia !!
Ummanni Walaayitaa sirna nama nyaataa #Abiyyi Ahmad Bilxiginnaa irratti qabsoo finiinsaa jira!
Odeefano ijoo fi Nafxanyaan eenyu/ maali?
Siyaasa Itoophiyaa: ABOn lamatti qoodamaa jiraa?
ABOn miseensota GS gidduu kana seera dhaabichaan ala socho’an irratti tarkaanfii fudhate.
Chaltu Takele Abetu mirga Wabiidhaan Mana hidhaatii lakkifamtee
Stop killing Wolaita!